Axkaamta Ramadaanta; Qore Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub Qaybtii 1aad | Haatuf Media Network
Erayga ‘soon’ waa ka joogsi laga joogsanayo wixi Alle SWT faray in aan la samayn, discount waana in aad xilli tirsan ka af xidhnaato cuntada, cabbitaanka iyo galmada. Culimada ku horraysa luuqadda Carbeed waxa ay ka soo dheegtaan aayadda ka warramaysa Maryan Bintu Cimraan kolkii ay ka aamustay hadalka inay wax tilmaanto mooyee, ee tolkeedna su’aashii ku soo celceliyeen, ayey si kooban ugu tidhi, “Waxa aan Ilaahay nidar kula galay soon.”
Culimadaasi waxa ay yidhaahdaan waxa ay ka joogsatay hadalkii ; sidaa darteed ayey u adeegsatay odhaahda ah soon iyadoo ula jeedda aamusni. Markaa haddii ay ka joogsigii hadalka u adeegsatay erayga soon innaguna waxa aynu u qaadanaynaa in eraygaasi yahay ka joogsi laga joogsanayo wixi Alle SWT faray in laga joogsado, gaar ahaan xilliyada Ramadaanta iyo xilliyada kale ee qofku Alle SWT u sooman yahay.
Shanta tiir ee dhidibbada u haya diinta Islaamka mid ka mid ah weeye soonku, haddii meesha laga saaro tiirkaasna diintu la’aantii noqonmayso mid dhammays tiran, waana tiirka afaraad ee islaamka. Sannadka Islaamka waa bisha ugu qiimaha badan ee la tirsado Ramadaantu, waana bil sidata dheeraad ay ku kaliyeysatay, sidaa awgeed ayey ku mutaysatay inay ahaato bil ka khayr badan bilaha kale oo dhan.
Soonku waxa uu bilaha kale ku dhaafay waa gudashada af-xidhnaanta soddonka cisho ah, lagana af xidhan yahay cabbitaanka, cunitaanka iyo dhammaan wixii kale ee aan marka hore ba bannaanayn, taas oo aanay jirin bil la wadaagta. Af-xidhashadaasi waa waa tiirka ugu muhiimsan ee ay leedahay bishani, waana ta keentay in Alle SWT ku doorto inuu si gaar ah u sheegto bishan sida ku sugan xadiis-qudsiga, “Waxqabad kasta oo ina Aadan la yimaaddo isagaa leh soonka mooyee, kaana anigaa leh (soonka), anigaana ka abaal celinaya.”
Hadalkaa Alle SWT waxa laga dheegan karaa inay la gaar noqotay bishani sirta ah in qofka af-xidhan iyo Alle SWT uun ay is try it viagra canada prescription og yihiin. Waayo qofka tukanaya waa la ccivs.ro arkaa tukashadiisa, qofka wax sadaqaysanayana waa la arkaa haba arko ka uu siinayaaye, sidoo kale ka xaj gudanaya isna maaha mid qarsoomaya se ka af-xidhan isaga iyo Allihii uun baa is og, waana ta keentay in Alle SWT sidaa u soo dhawaysto.
Bishani maaha bil ugub ku ahayd soo saaristii ergaygii ugu dambeyey ergooyinkii Alle SWT ‘Muxammed’, hase ahaate, waa bil la yaqaanay oo ergooyinkii hore ba ummadahooda fari jireen. Eeg aayadda Alle SWT ku leeyahay, “Kuwa iimaanka laga helayoow waxa korkiina lagu waajibiyey soon, sidii kuwii idinka horreeyey ba loogu waajibiyey si aad u viagra stories baqataan.” Halkaa waxa aad ka arkaysaa in arrinta ugu weyn ee loo amray samaynteedu tahay in Alle SWT laga baqo.
Haddaba bishani waxa ay leedahay tiirar ka kooban waajibaadyo iyo sunnayaal guntin u ah gudashada cibaadadaa Alle SWT. Bal aynu soo hor marino waxyaabaha soomka waajibiya: